မြက်ရိုင်းတောထဲမြင်းရိုင်းတွေ | ဥက္ကာကိုကို
Posted by oakkarkoko on October 13, 2008
Posted in: ကဗျာ, ရသစာစုလေးများ.	Tagged: ကဗျာ.	Leaveacomment
Written by ဥက္ကာကိုကို
အထီးကျန် လို့ အမည်တပ်ထားတဲ့
စံပယ်တွေကြွေတာ စောတယ်သူငယ်ချင်း ။
ငါတို့ခေါင်းထက်မှာ ရပ်တန့်နေတာ ကြာခဲ့ပြီ ။
စံပယ်ပန်းငုံတွေ မိုးအမှီပွင့်ရလိမ့် ။ ။
(အိမ်ဝေး ၊ မိသားစုဝေး ၊ သူငယ်ချင်းကဗျာဆရာများသို့)